अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा २८० गैरकानुनी आप्रवासी पक्राउ - RastraKhabar-Nepal's No. 1 Digital Newspaper
विश्व अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा २८० गैरकानुनी आप्रवासी पक्राउ
अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा २८० गैरकानुनी आप्रवासी पक्राउ
April 5, 2019 April 5, 2019 rastrakhabar 0
डालस — चैत्र २२ ।
अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीहरुले टेक्सास राज्यको एक प्रविधि कम्पनीमा कार्यरत २८० भन्दा बढी कर्मचारी पक्राउ गरेका छन् । अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयका अनुसार संघीय जाँच अधिकारीका अनुसार उनीहरु गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्दै आएका आप्रवासी हुन् ।
अमेरिकी इतिहासमा टेक्सासको कुनै कम्पनीबाट यति ठूलो संख्यामा कामदार पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो।
अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयका अनुसार संघीय जाँच एजेन्टहरुले बुधबार टेक्सासस्थित सीभीई टेक्नोलजी ग्रुपमा कार्यरत २८० कर्मचारीलाई पक्राउ गरेका हुन्। यो कम्पनी डालसबाट करिब २४ किलोमिटर उत्तरपूर्वको कोलिन काउन्टीमा छ।
एजेन्सीले ‘गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका व्यक्ति कम्पनीमा कार्यरत रहेको’ दाबी गरेको छ। तर पक्राउ परेका व्यक्तिबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। एजेन्सीले गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई काममा लगाएको सूचनाका आधारमा छापा मारेको जनाएको छ।
सीभीईमा कार्यरत येसेनिया पोन्सले कामदारको धरपकड निकै कहालीलाग्दो रहेको जनाइन्। ‘यो निकै डरलाग्दो थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सधैंझैं काम गरिरहेका थियौं। अकस्मात् कोही चिच्याएको सुनियो। हामी बाहिर निस्केर हेर्दा एक अधिकारीले मैले भनेअनुसार गर भनिरहेका थिए।’ उनका अनुसार सहकर्मीलाई पक्राउको विरोधमा प्रदर्शनसमेत गरिएको छ।
नियन्त्रणमा लिइएकाहरुसँग सुरुमा अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयका अधिकारीले सोधपुछपछि ‘मानवीय अवस्था’ बारे रिपोर्ट तयार गरिनेछ। त्यसका आधारमा आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयले उनीहरुमध्ये कसलाई हिरासतमा राख्ने वा कसलाई मानवीयताका आधारमा छाड्ने भन्ने तय गर्नेछन्।
यद्यपि, कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘पक्राउ परेका गैरकानुनी आप्रवासीको औँठाछाप लिई अमेरिकाबाट फिर्ता गर्न प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।’ अमेरिकाको आयोवा राज्यबाट सन् २००८ मा ४ सय कामदारलाई आवश्यक कागजातबिना नै काममा लगाइएको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो।
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गर्दै आएका छन्। मेक्सिको सीमाक्षेत्रबाट ‘आप्रवासीको लस्कर अमेरिका प्रवेश गरेको’ भन्दै ट्रम्पले पर्खाल लगाउने बताउँदै आएका छन्। तर अमेरिकी संसदले पर्खाल बनाउने माग गरेको बजेट अस्वीकृत गरिदिएपछि ट्रम्पले आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेका छन्।
उक्त घोषणासँगै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले प्रतिरक्षा बजेटबाट सीमा पर्खालका लागि एक अर्ब डलर छुट्टयाइसकेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले उक्त रकम सैनिक इन्जिनियरका लागि व्यवस्था गरिएको जनाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम करिब ९१ किलोमिटर सीमामा तारजाली लगाउनका लागि खर्च गरिनेछ।
विपक्षी दल डमोक्रयाटले भने ट्रम्पको विवादास्पद निर्णयको विरोध जनाउँदै आएको छ। दलले राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी विशेषाधिकार -भिटो) प्रयोग गरेको भन्दै मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ।
ट्रम्पले पर्खाल बनाउन यस वर्ष करिब ५.७ अर्ब डलर माग गरेका थिए। तर अमेरिकी संसदले राष्ट्रपतिको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उनले आपत्कालीन स्थिति घोषणा गरेका हुन्। आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिले सैनिक कोषको बजेट सिधै अन्य प्रयोजनमा खर्चन पाउने प्रावधान छ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको २% काम बाँकी
थ्री व्रदर्स फोटोग्राफीको आयोजनामा “मिस्टर एण्ड मिस स्कुल नवलपुर, २०१९” आयोजना हुँदै
विश्वभर कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ६० लाख माथी
आइसोलेसनमा २ वर्षीया बालिकाको मृत्यु, कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब संकलन
कोरोना कहरमा २०७७।७८ को वार्षिक बजेट – बिष्णु शर्मा
सुत्नेवेलामा निन्द्रा परेन ? अपनाउनुहोस यि उपाय
भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार प्रोपगाण्डा मात्र : नेपाली सेना
दूरी : पुस्तकप्रसाद
बाँके जिल्लाभर अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा २ सय ३३ जना कैदीको सजाय मिनाहा
काभ्रेमा करिब ५० वर्ष यताकै भिषण वर्षा
प्रदेश २ मा थप ७६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि
कोरोना फेरी फैलिने त्रासपछि ऊहानमा गरियो ६७ लाखमा कोरोना परीक्षण
कवि पुस्तक प्रसादका देशभक्तिका कविता : ‘नाङ्गो छाती लिएर सिमानामा उभिन तयार छु’
मिस विश्वकर्माको ताज सोनियालाई, सिमान्त बने पहिलो मिस्टर विश्वकर्मा
“मिस एण्ड मिसेस तिज नेपाल” को ट्यालेण्ट राउण्ड सम्पन्न,ग्राण्ड फिनाले भाद्र १८ गते
गायक तथा संगितकार सुरेन्द्रको नयां गितको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
मिस वर्ल्डको सेमिफाइनलमा श्रृंखला खतिवडा
संचारकर्मी राज लुईटेल थाईलैण्डमा “ग्लोबल ईन्टरनेशनल मिडिया पर्सनालिटी २०१९” बाट सम्मानित
न्युयोर्कमा गुँन्जदै रामकृष्ण ढकाल, जुलाई २८मा “ढकाल सुमधुर साँझ” को आयोजना हुने
“चुडी लग्यौ ” बोलको मर्मस्पर्शी गीतको भिडियो छायांकन समाप्त, नयां वर्षको अवसरमा सार्वजनिक गरिने
कोरोनाले तहसनहस इटाली : अस्पतालका सिँढीभरि लास ओसार्न लाइनमा सैनिक ट्रक
भरतमोहन अधिकारी स्‍मृति फाउण्डेसनले शुरु गर्‍यो कोराना भाईरस सचेतना अभियान
चालीस वर्षपछि नयाँ पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयार गरिदै
१५ सय किलो भन्दा बढि सुनले निर्माण गरिएको आकर्षक सुन्दर मन्दिर
मिस ग्यालेक्सि २०१८ को सक्सेस पार्टीमा प्रमाण पत्र वितरण
नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष डा.अन्जान शाक्यको बिदाई ,अध्यक्षमा उर्मिला श्रेष्ठ चयन